क्यान्टाब्रियाका समुद्री तट: प्राकृतिक सौन्दर्य र पानी खेलहरू Absolut यात्रा
क्यान्ट्याब्रियाको समुद्री तटहरू निस्सन्देह बीचमा छन् उत्तरी स्पेन मा सबै भन्दा राम्रो। यो त्यस्तो क्षेत्र हो जुन तट र हिमालहरू धेरै छोटो दूरीले विभाजित गर्दछ र यसले यसलाई पहिलो दरको पर्यटन गन्तव्य बनाएको छ। यो एक कस्टलाइन छ कि कभर छ दुई सय किलोमिटर भन्दा बढी र त्यसमा सबै स्वादका लागि बीचहरू पनि समावेश छन्।
तपाईलाई धूप बाल्न र आफ्नो परिवारको साथ शान्तसाथ नुहाउनको निम्ति त्यहाँ उत्तम छन्। साथै अधिक जीवन्त, युवा बीच ठूलो सफलताको साथ, र सर्फिंगको लागि समान रूपले उत्तम। त्यस्तै, त्यहाँ अवस्थित शहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरू छन् अद्भुत परिदृश्य। तर सबै समुद्री तटहरू Cantabria तिनीहरूसँग एक साधारण डिनोमिनेटर छ: तिनीहरू उत्कृष्ट छन्। यदि तपाईं तिनीहरूलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई हाम्रो अनुसरण गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 क्यान्टाब्रियामा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
1.1 एल सार्डिनरो, क्यान्ट्याब्रियाको समुद्री तटको प्रतीक
1.4 एल पन्तल, क्यान्टाब्रियाको समुद्री तटमा सबैभन्दा धेरै जिज्ञासु मध्ये एक हो
1.6 लांग्रे, क्यान्टाब्रियाको समुद्री तटको अर्को आश्चर्य
1.8 पागल हो
1.11 बेरेलिन, क्यान्टाब्रियामा एक सबैभन्दा पश्चिमी तट हो
क्यान्टाब्रियामा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
हामी बीचको बीचबाट हाम्रो मार्ग सुरू गर्नेछौं सान्टान्डर, जुन धेरै र धेरै सुन्दर छन् र त्यसपछि क्यान्टाब्रियामा अन्य शहरहरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको मार्फत जारी रहन्छ, पहिले ईर्ष्याको कुनै कुरा छैन।
एल सार्डिनरो, क्यान्ट्याब्रियाको समुद्री तटको प्रतीक
एल सार्डिनरो कन्ट्याब्रियाको समुद्री किनारहरूको सब भन्दा राम्रो उदाहरण हो र सबैभन्दा लोकप्रिय। यद्यपि हामीले अब बहुवचनमा बोल्नुपर्दछ, किनकि सान्तान्दरको यो अंश छ दुई बेनामी समुद्र तटहरू। यो सत्य हो कि तिनीहरू एक पछि अर्को गर्दै पनि, जब ज्वार बढ्छ, तिनीहरू एकताबद्ध रहन्छन्।
सँगै, तिनीहरू शान्त र रमाईलो पानी संग लगभग दुई किलोमीटर को एक सुन्दर रेतीले क्षेत्र बनाउँछ। यसको नाम यस ठाउँमा अवस्थित छ जहाँ यो अवस्थित छ र यसैलाई यसैकारण भनिन्छ किनकी समुद्रको त्यो भागमा सार्डिनहरूको लागि महत्त्वपूर्ण माछा मार्ने ठाउँ थियो।
पहिलो समुद्री किनार एक सुन्दर प्रोमेनेड द्वारा फ्रेम गरिएको छ। र, यदि तपाई यसमा जानुहुन्छ, तपाईले क्षेत्र को केहि स्मारकहरु लाई हेर्ने अवसर लिन सक्नुहुन्छ भव्य क्यासिनो, २० औं शताब्दीको सुरूमा निर्माण गरिएको; एउटा उत्तम होटल र उही अवधिबाट अन्य भव्य दरबारहरू।
हामी बिर्सदैनौं, साथै, यो समुद्र तटको एक प्राकृतिक सीमा हो ला मग्दालेना प्रायद्वीप, जहाँ मूल्यवान छ महल उही नामको, एउटा एक्लेक्टिक शैली निर्माण जुन फ्रान्सेली र अंग्रेजी वास्तुकलालाई माउन्टेन बारोकबाट योगदानका साथ संयोजन गर्दछ।
केवल ला माग्डालेनाको प्रायद्वीपलाई फर्काएर, तपाईंले यो समुद्र तट फेला पार्नुहुनेछ जुन यसको नामको बाबजुद पनि, मध्ये एक हो बढी सुरक्षित सबै क्यान्टाब्रिया को। यो फराकिलो बलुई क्षेत्र हो जसमा सबै पूर्वाधार र सेवाहरू छन् कि तपाईं समुद्र तटमा कुनै आश्चर्यजनक दिनको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
साथै, तपाइँले जान्न अवसर लिन सक्नुहुन्छ क्यान्टाब्रियन समुद्री संग्रहालय, जो अर्को ढोका हो। यससँग आधुनिक एक्वैरियमहरू छन् र उनीहरूले नुहाउने समुद्रको साथ क्यान्टाब्रियनहरूको पुर्खाहरूको सम्बन्धमा एथनोग्राफिक नमूनाहरू पनि छन्।
यसको सानो आकार पचास मिटरको बावजुद, यो क्यान्टाब्रियाको समुद्री तटमा हो सबैभन्दा सुन्दर यसको विशिष्टताको लागि। एक तटीय किनार रेखा र अर्कोमा चट्टानी प्रोम्टनरीको साथ, यो एक बलुवा क्षेत्र हो दुबै तिर नुहायो र यो जब हराउँछ अदृश्य हुन्छ। जब यसलाई हावा हुँदछ खतरनाक बनाउँदछ, जोडदार छालहरू उठ्दा।
अन्यथा, यो शान्त समुद्र हो। वास्तवमा, यो नग्नवादका फ्यानहरूले मनपर्नेहरू मध्ये एक हो। यदि तपाइँ यो जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले सान्तेन्डर नजिकै पाउनुहुनेछ, खास गरी करिब तीन किलोमिटरबाट सोटो डे ला मारिना.
एल पन्तल, क्यान्टाब्रियाको समुद्री तटमा सबैभन्दा धेरै जिज्ञासु मध्ये एक हो
यो सान्तेन्डरको खाडीमा पनि पाइन्छ र यो जिज्ञासु पनि छ। किनकि यसको बारेमा छ जिब्रो को मुख को साथ लगभग पाँच सय मिटर लम्बाई को राम्रो सुनहरा बालुवा को क्युबिया नदी एक तर्फ र अर्को पट्टि खुला समुद्र।
तपाईं यो बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ Somo टिब्बाहरू बीच काठको पैदल बाटोको माध्यमबाट। तर तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ महलको एम्बेसकेडेरो डे सान्तेन्डरको दरबारमा अद्वितीय "पेडरेरेस" मध्ये एक, बारहरू शहरको लागि मार्ग बनाउनका लागि परिचित पेड्रिआ.
अघिल्लोको छेउमा तपाईको सोमो बलुवा क्षेत्र छ, करीव चार किलोमिटर लम्बाई र एउटा कडा फुलाउने जुन अभ्यासका लागि उपयुक्त बनाउँदछ। सर्फ। यस समुद्री तटले सेवाहरू अनुकूलन गरेको छ र नगरपालिकाको हो Ribamontán अल मार्च, यसको लागि प्रसिद्ध हस्तशिल्प र तिनीहरूको लागि पनि समुद्री खाना ग्रिल हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि प्रयास गर्नुहोस्।
लांग्रे, क्यान्टाब्रियाको समुद्री तटको अर्को आश्चर्य
उही नगरपालिका क्षेत्रमा लाre्ग्रे समुद्री किनार छ, सम्पूर्ण क्षेत्रको सब भन्दा देखिने एक। एक किलोमिटर लम्बाइको साथ र एक इम्पोजि by द्वारा बन्द गरियो चट्टान तराई पट्टीको साथ जारी जारी बीस मिटर भन्दा लामो यो समुद्र तटमा प्रशस्त छालहरू छन्। यद्यपि यो सर्फरहरूको लागि क्यान्टाब्रियाको समुद्री तटहरूमा उत्तम छैन।
अर्कोतर्फ, यो हेर्न धेरै सामान्य छ गोताखोर चट्टान क्षेत्रमा। जे होस्, यदि तपाईं शान्त बाथरूम रुचाउनुहुन्छ भने, हामी सुझाव दिन्छौं Llaranza को पूलहरू, केहि प्राकृतिक पोखरी पनि चट्टानहरू नजिक छन्।
राम्रो सेतो बालुवाको यो सुन्दर समुद्र तट नगरपालिकामा अवस्थित छ पाईलागोससान्तेन्डर नजिकै। यो वास्तवमै प्याराडिसाइकल वातावरणको लागि: बाहिर खडा छ, कल गर्ने एक टूटेको तट। यो एक चट्टान जटिल हो जुन ety ० लाख वर्ष भन्दा बढी पुरानो चुनढुंगाको चट्टान र कुमारी टापुद्वारा गठन गरिएको हो।
तसर्थ, यदि तपाईं यसलाई चिन्नुहुन्छ भने, तपाईं एक अद्भुत परिदृश्य र साथै धेरै शान्तिको आनन्द लिनुहुनेछ, किनभने यसको गाह्रो पहुँचले यसको कारण गर्दछ। थोरै भीड.
सेन्सको त्यस्तै शानदार समुद्र तटहरू छन् साबेर, त्यो ला Concha को लहर किनार। तर लस लोकोस एक उत्तम हो। पहाड र तीन सय पचास मिटर लामो द्वारा बनाइएको, यो बतास चलेको छ र कडा छालहरू छन्। तसर्थ, यो तपाइँ मा सर्फ को लागि पनि ठूलो छ। यसमा सफर र वेस्टबास्केट जस्ता उपकरणहरू छन्, यद्यपि यो लाइफगार्ड सेवा छैन।
यसबाहेक, तपाईं भ्रमण पछि स्वास्थ्यअमिको वा फेरेरोस परिवारको रूपमा धेरै क्विन्टा र भव्य घरहरू मिलेर बनेको यसको वास्तु सम्पदाको आनन्द लिने अवसर लिनुहोस्। र समुद्र तटको धेरै खुट्टाहरूमा तपाईंसँग यो छ सेरुति महल, जसले मध्यकालीन महलको नक्कल गर्दछ जबकि यो १ 1904 ०। मा निर्माण गरिएको थियो।
को नगरपालिका बीच स्थित उद्धरण चिन्हहरू र को स्यान भिसेन्टे डे ला बारकेरा, यो सुन्दर समुद्र तट करिब दुई किलोमिटर लामो छ। तर सबै भन्दा माथि, यो एक अद्भुत प्राकृतिक वातावरणले घेरिएको छ: त्यो को प्राकृतिक पार्क जसबाट यो नाम प्राप्त गर्दछ। थपमा, यो सर्फिंगका लागि भव्य छ किनकि यसमा सबै वर्षभरि राम्रो छालहरू छन्।
यदि तपाईंले यस समुद्री तटमा भ्रमण गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने, स्पेनको सबैभन्दा सुन्दर शहरहरूमध्ये एक कमिलाहरू भ्रमण गर्ने अवसरलाई नबिर्सनुहोस्। अत्यावश्यक छ कि तपाईंले उनीहरूको मध्यकालीन घरहरू देख्नुभयो, यो पुरानो विश्वविद्यालय, the सोब्रेल्लानो दरबार; the गौडाको लहरी र सान क्रिस्टबलको बारोक चर्च, ती सबै सांस्कृतिक चासो को सम्पत्ति।
तपाईको नगरपालिकामा पनि धेरै राम्रा तटहरू छन् स्यान भिसेन्टे डे ला बारकेरादुबै उहीको राजधानी र काउन्सिल भरि। ती मध्ये, कि बाहिर खडा Meron, त्यो गुलाब O Tostadero र त्यो गदा। जे होस्, हामी तपाईंलाई एउटा कम ज्ञात तर महान् सुन्दरताको बारेमा बताउँदैछौं।
यो बारेमा छ Fuentes समुद्र तट, एक सानो कोभ मुश्किल साढे एक सय पचास मिटर लामो र बीस चौडा। यो ढु rock्गाको दुईवटा बहिर्गमनहरू द्वारा बनेको एउटा कोभमा अवस्थित छ जसको ढु .्गा रातो रातो हुन्छ सूर्यको किरण संग सम्पर्क मा। अर्कोतर्फ, यो लगभग कुमारी छ र कुनै निगरानी छैन, त्यसैले तपाईं नुहाउँदा सावधान हुनुपर्छ।
बेरेलिन, क्यान्टाब्रियामा एक सबैभन्दा पश्चिमी तट हो
Berellín बीच नगरपालिका मा अवस्थित छ Val de San Vicente, जुन अस्ट्रुरियामा पुग्नु अघि क्यान्ट्याब्रियामा अन्तिम अन्तिम हो। यो cove० मिटर चौडा बीस मिटर चौंडा पनि हो। दुई प्रोम्टनरी द्वारा फ्रेम, यो चट्टानहरु को विस्तार द्वारा बन्द छ एक शानदार छवि अनि तिनीहरूले यसको पानीलाई शान्ति दिन्छन्। यसको सानो आकारको बावजुद, यसले तपाईंलाई सबै सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
जब तपाईं भेल दि स्यान भिसेन्टे भ्रमण गर्नुहुन्छ, तपाईं काउन्सिलमा दुईवटा पुरातात्विक साइटहरू देख्न सक्नुहुन्छ: कास्ट्रो डेल कास्टिलो र Fuente डेल सलोन को गुफा, साथै Estrada टावर। तपाईंसँग अधिक समय भए पनि, तपाईं सुरू गर्न सक्नुहुनेछ लेबनिएगा मार्ग, जुन तपाईंलाई Camaleño ले लग्नेछ।
हामी अब क्यान्ट्याब्रियाको समुदायको पूर्वतिर गइरहेका छौं यस सुन्दर तटको बारेमा तपाईंलाई बताउन सान्तोआ। यसको अघिल्लोसँग कुनै सरोकार छैन, किनकि यो दुईवटा किलोमिटर भन्दा लामो लम्बाइको रेतीले क्षेत्र हो जुन द्वारा फ्रेम गरिएको हो Buciero माउन्ट गर्नुहोस् एकातिर र नगरपालिका Argoños अर्कोमा।
केमा पछिल्लासँग मिल्दोजुल्दो छ यो सुविधायुक्त परिदृश्यमा। यो उत्तर र दक्षिणमा तपाईंसँग भएको समुद्रको लागि खुला छ सान्तोआको दलदल। यो तपाइँ सबै सेवाहरू प्रदान गर्दछ र विशिष्ट होल्ड गर्दछ निलो झण्डा.
तपाईले आफ्नो यात्राको फाइदा पनि सान्तोआनामा लिन सक्नुहुनेछ यसको केही स्मारकहरू हेर्नका लागि। उदाहरण को लागी, सान्ता मारिया डेल प्यूर्टोको रोमान्सिक चर्च, ला Chiloeches घर-महल र मन्जेनेडोको मार्क्विसको घर, ती सबै सांस्कृतिक चासो को सम्पत्ति।
खाता लारेडो तीन मुख्य समुद्र तटहरूका साथ। धेरै अनौठो त्यो हो मैले उसलाई बचाए, एल पन्तल वरिपरि घुमाव बनाउन। यो यसको प्राकृतिक सेटिंगको लागि पनि राम्रो छ आइला, कडा छाल र बतास संग।
तर सबै भन्दा शानदार शायद छ एल रेगाटन बीच, जुन एल पन्तलबाट कोलिन्ड्रेसको नगरपालिकामा जान्छ र पछाडि सर्छ ट्रेटोको अभयारण्य। तिनीहरू प्रायः तीन हजार मिटर ठीक र सुनौलो बालुवाका छन्। यसको पानी शान्त छन् र यसले तपाईंलाई सबै सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
पुरानो शहर लारेडो, छ मध्ययुगीन सडकहरू कि को रूपमा चिनिन्छ को भ्रमण गर्न मौका छोड्नुहोस् पुरानो Pueblaसाथै उनको सान्ता मारिया डे ला असुनसिनको गोथिक गिर्जाघर र को आधुनिकतावादी भवन बजार.
हामी कास्ट्रो उर्डाइल्स पुगेका छौं, पहिले नै नजिकै बास्क देश, यसको समुद्री तटहरू जान्न। सबै भन्दा राम्रो शायद छ ब्राजोमार, जुन सहरमा नै अवस्थित छ र यसैले सबै सेवाहरू छन्। थप रूपमा, यो एक सुन्दर प्रमोनेडले घेरिएको छ। यसको विस्तार करिब चार सय मिटर छ र बीचमा छ कोटोलिनो पोइन्ट र डन लुइस डक त्यो आंशिक रूपमा यसलाई बन्द।
पोर्टको पछाडि, तपाईंसँग छ कास्ट्रो Urdiales को पुरानो शहर, जसमा १ Santa औं शताब्दीबाट सान्ता आनाको महल खडा छ; सान्ता मारिया डे ला असुनसिनको गोथिक चर्च; सान्ता आना र मध्यकालीन पुलको हर्मिटेज। हामी तपाईंलाई उनीहरूलाई भेट्न सल्लाह दिन्छौं किनकि यी स्मारकहरूको कोटीहरू छन् ऐतिहासिक - कलात्मक जटिल.
निष्कर्षमा, यी केन्टाब्रियाका केही उत्तम समुद्र तटहरू हुन्, तर त्यहाँ धेरै अरूहरू छन् जुन हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं। उदाहरण को लागी, कि को अन्टुर्टा ट्रास्मिराको तटमा; त्यो Trengandin, सान्तोआ मार्शहरू नजिक; त्यो माडेरो, कोस्टा क्युब्राडा, वा मा पोर्टियो, यसको भारी Aguja डे लास Gaviotas साथ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » क्यान्ट्याब्रिया तटहरू
अज़ोरेस टापुहरूमा के हेर्ने